Izinkumbi, ama-aphid, amabhu emadlelana nezinambuzane zokusanhlamvu. Izinambuzane eziphezulu zonyaka ka-2020 - "Magazine Potato Magazine"
Inkampani ka-Agasti ibhale izinambuzane eziyingozi kakhulu ezibeka engcupheni isivuno ngo-2020. Ukugxila kulesi sikhathi sonyaka kuzinkumbi, ama-aphid, amabhu okugcoba nezindawo zokusanhlamvu. Ukusakazwa kwezinambuzane kusizwa kubusika obumnene, obuqala ukufudumala. Ngasikhathi sinye, kulo nyaka, abalimi basindiswe amacimbi amaningi alimaza izilimo zezolimo ngonyaka ka-2019: i-burdock, ngenxa yokufuduka okuningi okwenzeka kusuka enkampanini kuya emasimini, izimoto emigwaqweni zihamba ngezinyawo, kukotini kuxazululwa ngaphakathi kwamacembe ommbila, into esemqoka yinundu leklabishi, elinokwenyuka kwenani labantu lingawuqeda umsebenzi wokutshala udlwenguliwe ezweni lethu. Ukuphinda kukhiqizwe iLepidoptera kukhawulelwe yiqhwa lika-Ephreli eningizimu yeRussia.
Ngokuphikisana nesizinda sokuhlasela okungakaze kubonwe ngaphambili kwesikhonyane e-Afrika, e-Asia naseMiddle East eRussia, izifunda zaseNingizimu neNorth Caucasus zihlangene ekulweni nesifo esiyingozi: iStavropol, Kalmykia, Dagestan, Chechnya, Astrakhan, Volgograd neRostov. Lezi zindawo zaseRussia ziwuhlobo lomngcele osenyakatho, lapho “isikhonyane” sakwelinye izwe singandizela khona bese siqala ukuzala lapho.
"Ukuqubuka okukhulu kwesibalo sabantu besikhonyane ngo-2020 kwaphawulwa ezifundeni zaseStavropol, Kalmykia, Dagestan, Volgograd nase-Astrakhan," kusho uDmitry Belov, inhloko yezokuthuthukiswa komkhiqizo e-Avgust. - Kodwa-ke, ukuqubuka nemiphumela yako yizinto ezihlukile, futhi ngokuvamile kulo nyaka sikwazile ukubekezelela isikhonyane. Ukuqubuka kubhalisiwe njengomphumela wokuqapha: empeleni, kuyimodeli eyakhelwe kwisisekelo sedatha yangempela, esekelwa imininingwane yesimo sezulu kanye nokuqapha idatha yezifunda lapho kusuka isikhonyane kudlule khona. Uma e-Asia, eMiddle East, e-Afrika, kunyuka isikhonyane, njengoba kulo nyaka, kuyacaca-ke ukuthi nathi kufanele silungiselele. "
Ukuqapha kuyenziwa kusetshenziswa ukumbiwa kwenhlabathi ezindaweni zasendaweni yesikhonyane. Njengomthetho, lokhu kufaka imishayo, imbobo, izigodi, izihlahlana zomhlanga endaweni enomswakama. Ochwepheshe bafuna "izinhlwathi" zesikhonyane, bangabona izibungu, futhi esimweni esibi kakhulu, baqopha indiza - lapho kuvela inqwaba yesikhonyane ephikweni. Ukusakazeka kwesikhonyane kuvame ukulawulwa ngokuphulukisa izindawo ezinegciwane ngama-insecticides ngaphambi kokundiza. Ngakho-ke, ukuqubuka kungaba kukhulu, futhi nomonakalo kwezolimo kusuka kuwo - kukuncane. Inkampani "Agasti", ikakhulukazi, iphawula ukuthi kulo nyaka izibonakaliso zokulimala kwezilimo yizikhonyane zibhalisiwe ezifundeni zaseStavropol naseVolgograd.
Iminyaka eminingana ngokulandelana, ama-aphid abelokhu ebangela izinkinga abakhiqizi bezolimo baseRussia, onakalisa izilimo zikajongilanga, ummbila, uphizi nezinye izitshalo. Ngokusho kochwepheshe bango-Agasti, ama-aphid angadala ukulimala okukhulu, ngoba akhombisa ukumelana nama-inrecticides e-pyrethroid ne-neonicotinoid - ikakhulukazi ezindaweni eziseningizimu, lapho esimweni sezulu esishisayo ama-neonicotinoids ahamba kalula ngaphakathi kwezitshalo ezomile futhi angafinyeleli inhloso yawo. Ngakho-ke, ochwepheshe batusa ukusebenzisa ama-insecticides ahlanzekile we-organophosphate noma ukuxubana nethangi ngokumelene nenkathazo. Ngo-2020, ama-aphid athinteka ezitshalweni eziseVoronezh naseKursk, endaweni yaseStavropol Territory nase-Altai Territory.
Amacimbi amnyama enundu le-meadow - elinye inkathazo elikhathaza abalimi kanye nabahlali basehlobo kule sizini - bakhetha izitshalo besebancane, ezinamahlamvu aluhlaza. Ehlobo leli, inani lalezibungu laliphezulu kakhulu kunokujwayelekile. Lokhu kuphawuleke ikakhulukazi esifundeni saseNovosibirsk, e-Altai Territory, endaweni yengxenye yeKrasnoyarsk Territory naseSifundeni sase-Omsk.
“Isifunda esiPhakathi kweBlack Earth Earth, ngokwesibonelo, sebesejwayele inundu elifudlayo, akuyona inkinga enkulu kubalimi. Yize thina, ikakhulukazi, sesibonile ukuthi, uma kungekho ukwelashwa ngamalungiselelo wezinambuzane eziluhlaza zethanga, isitshalo sihlala sigcotshisiwe, sinamaqabunga enziwe ngokuphelele. Impi yokulwa nenundu elincane, uma itholakala ngesikhathi, ayinzima nhlobo: ingachithwa ngempumelelo ngosizo lwezidakamizwa eziningi, kufaka phakathi i-pyrethroids, ”kusho uDmitry Belov.
Ngenxa yobusika obufudumele eRussia, inani lezindawo zokudla okusanhlamvu liyanda. Izinhlamvu zasebusika (ezinamabala abomvu) zikhubazaza ngokungathí sina ukugcotshwa kukakolweni ebusika. Ngo-2018-2019 kwakuvamile ikakhulukazi eStavropol Territory, Krasnodar Territory, naseRostov Region, futhi kulo nyaka babhaliswa ngisho naseningizimu yeSifunda iVoronezh. I-Wheat mite yi-microscopic mite futhi elimaza ukolweni wasebusika, kepha ngenxa yobukhulu bawo, amabala aphuzi emacembe avame ukwenziwa iphutha ngabakhiqizi bezolimo ngesifo se-fungal etiology noma imiphumela yesimo sezulu. Esikhathini esedlule nangonyaka owedlule, kwaqubuka ukuqubuka kwezinambuzane zabantu eRiphabhliki yaseBashkortostan, e-Altai, esifundeni saseNovosibirsk, esifundeni saseKurgan, ngezinga elincane esifundeni saseSverdlovsk naseChelyabinsk. Ngo-2020, yatholakala futhi endaweni yaseBashkortostan. Lo nyaka, esifundeni saseVoronezh, umkhaza uthinta kakhulu ummbila, ubhontshisi, izimbila.
Ngasikhathi sinye, inkampani ka-Agasti ithi izithikamezi ezinkulu ezifundeni eziseningizimu ngasekupheleni kuka-Ephreli azilimazanga kuphela izilimo, ezidale ukushoda kwesivuno kulo nyaka, kodwa futhi zanciphisa nomsebenzi wezinambuzane eziningi. Okokuqala - inundu leklabishi, elidale umonakalo omkhulu ezitshalweni zokudlwengulwa kwentwasahlobo eminyakeni emihlanu edlule. Ngo-2020, akukho ukuqubuka kwesibalo saso esabhalwa phansi.
“Ngesikhathi kusuka ngonyaka ka-2015 kuya ku-2019. ezweni lethu, indawo yokudlwengulwa kwentwasahlobo inyuke isuka kumahektha ayisigidi ayizigidi eziyi-1, kusho uDmitry Belov. - Abalimi abaningi baqala ukufaka i-rapeseed kwisakhiwo sokujikeleza kwezilimo, ngoba yathunyelwa ngenkuthalo ezimakethe zase-Europe nase China kokubili ngesimo sokusanhlamvu nangendlela yamafutha. Ngesinye isikhathi, bakwazi ngisho nokucwilisa abakhiqizi abathile baseYurophu. Kodwa-ke, lesi simo sangenelelwa yinundu leklabishi - inkathazo ebilokhu ihlala eRussia, kepha inani layo elikhulayo libangelwa nokubanda okufudumele nokukhula ngokushesha kwezindawo ezidlwenguliwe.
Ukugqama kwenundu leklabishi ngukuthi ehlobo, izizukulwane eziningana zesinambuzane zingashintsha ensimini efanayo - ngokungafani, ngokwesibonelo, isikhonyane. Ngasikhathi sinye, amaqanda ezinambuzane, amacimbi, izimpungushe nabantu abadala bangaba sendaweni efanayo. Ngakho-ke, abalimi abaningi basebenzise ukwelapha ukubulala izinambuzane izikhathi eziyisithupha ngesizini, kanti isibalo sezikhundla ezithile kuma-insecticides abadlwengulwa emakethe sakhuphuka ngo-6-400%. Ochwepheshe benkampani "ka-Agasti" baphawula ukuthi ingxenye yabakhiqizi bezolimo ekupheleni konyaka we-500-2018. waze wanquma ukuyeka ukutshala ama-rapeseed, ngoba labo abangazange basebenzise ukwelashwa bangalahlekelwa ngokuphelele yisilimo, futhi nalabo ababekuvikela, ngenxa yezindleko zezinambuzane, bakhushulelwa kakhulu inzuzo.
Lonyaka, ukuqubuka kwemisebenzi yezinambuzane ezinjengebhabhathane le-burdock nakho bekungarekhodwanga, kanti ngonyaka owedlule amacimbi awo, imvamisa ambalwa ngenani futhi ondla ikakhulu ukhula, izilimo ezonakele esifundeni saseStavropol Territory, i-Kuban, esifundeni saseRostov naseVoronezh. Emigwaqweni lapho izindimbane zalezi zibungu zihamba zivela emasimini ziye ensimini ziyofuna isizinda sedoti, izimoto zingangena kalula ku-skid. Ngaphezu kwalokho, isifunda saseStavropol kulo nyaka asihlushwa ukotini - amacimbi awo amakhulu anwebayo womunwe ngonyaka owedlule alimaze ubhontshisi, ummbila, ukungena ngaphakathi kwecob, ngisho nezivini. Isimo esifana ne-buble yemabula sikhuphukile ngonyaka we-2020, okuthe eminyakeni yamuva nje sidale umonakalo omkhulu ezingadini eziseningizimu kanye nokutshala emadolobheni - ngokwesibonelo, eSocrhi.
"Isimo sezinambuzane eziningi sesishintshile: izimo zezulu nezinye izinto ezisazohlolwa ososayensi - kepha ngicabanga ukuthi kwakuyisimo sezulu sokuqala - kuholele ekutheni izinambuzane eziningi ezingekho kulo nyaka zivele zingekho. Angikukhiphi ngaphandle ukuthi abantu babo bebengancipha ngenxa yezindlela zokuzivikela ezithathiwe, - uDmitry Belov uyakholelwa. “Kodwa-ke, ngokujwayelekile, isimo sezulu sizoqhubeka sishintshe, futhi sizoba nezinkinga eziningi kakhulu zezinambuzane. Inselelo ezinkampanini ezinjengezethu ukuthuthukisa ubuchwepheshe bokuvikela isivuno nokunikela ngamathuluzi amasha okulawula. "
Izinto ezihlinzekwa yinkonzo yabezindaba yenkampani "Agasti"
Tags: "Agasti"ukuguquka kwesimo sezuluizinambuzane